Pokugara | Shanyira Hultsfred
Rara zvakanaka nehunhu kunze kwemusuwo. Muka wazorodzwa, zviitire wega chikafu chemangwanani uye wakasarudzika kuti uwane zvakatenderedza!
musha » pokugara
Hazvina mhosva kuti chii chinokwezva uye chinokuunza kuHultsfred, unogona kuwana pekugara gore rese rinoenderana nekugara kwako uye kukumbira kwauri. Nzvimbo yekugara yaHultsfred inosanganisira zvese kubva kumakamuri anotonhorera kusvika kumahotera anoshanduka uye mahotera akasununguka. Zvibate iwe kune yakasununguka kupera kwevhiki neiyo yepamusoro mwero kana kudzika tende pane imwe yemisasa yedu yakanaka - kana kudzika musasa mune inoyevedza hunhu.
Mhuri cottage ine dziva maonero munzvimbo yakanaka yechisikigo. Anenge makiromita gumi kumadokero kweHultsfred ndiyo nzvimbo yekuchengetedza uye yekuredza nzvimbo Stora Hammarsjöområdet. Nzvimbo ine hunhu hwesango iyo inokoka
Zhizha idyll pamhenderekedzo. Mhuri cottage ine inodzika dhamu dhizaini incl. jetty uye chikepe. Anenge makiromita gumi kumadokero kweHultsfred ndiyo nzvimbo yekuchengetedza uye yekuredza nzvimbo Stora Hammarsjöområdet. Nzvimbo
Midhudhudhu kupaka Mhuru cheni
Kupaka nzvimbo paKalvkätte gadheni nekuwana mvura, WC uye marara rack. Zvemukati Zvako Zvinoenda Pano
Makamuri ehusiku hwaHagadal
Manheru emakamuri ane nzvimbo yevanhu vana. Dzimba diki dzemakiromita gumi dzakaenzana pekugara kwehusiku. Dzimba dzinowanikwa munzvimbo yakakomberedzwa kuseri kwenzvimbo iyi. Poshi
Hotell Dacke ndiyo hotera yemhuri iri pakati muVirserum. Pedyo nehotera kune hombe yemotokari. Pedyo nesango nedziva. Iresitorendi yehotera
Midhudhudhu kupaka Målilla hembygdspark
Panzvimbo hombe yemotokari paMarlilla hembygdspark pane nzvimbo dzekupaka dzekaravhani nedzimba dzemota. WGS84 DD (LAT, LONG) 57.383221, 15.814379
Pikipiki kupaka Hultsfred
Pakati chaipo padyo nedziva nenzvimbo yekufambisa, chiteshi pane nzvimbo ina dzekupaka. Kusununguka kumira husiku humwe. Kana iwe uchida sevhisi yebasa, iwe unoendeswa kuCamping Hultsfred kana Frendo. WGS84 DD
Hostel iri pakati peHultsfed. 25 mibhedha mumakamuri maviri, dzimba dzekugara uye dzimba dzemhuri. Kicheni nyowani yemazuva ano yekuzvipa-yega neimba yekudyira yakagovaniswa. Yakagovaniswa shawa, WC, yakaremara chimbuzi uye
Målilla Hotell ihotera diki ineresitorendi. Kudya kwemanhasi, mapa, pizza uye masaradhi ari kupihwa pano. Iresitorendi ine kodzero dzizere. Kune makumi mana
Renda kottage pachitsuwa chako wega.Zvakanakira iwe urikutsvaga rugare nerunyararo. Rarama pachitsuwa chako chaicho mune kadumba kadiki zvakare
Idzo dzimba dzekuredza. Stora Hammarsjöområdet
Makamuri mana ehusiku ane dziva maonero eStora Hammarsjön. Anenge makiromita gumi kumadokero kweHultsfred ndiyo nzvimbo yekuchengetedza uye yekuredza nzvimbo Stora Hammarsjöområdet. Nzvimbo ine hunhu hwesango iyo inokoka
Pano unogara zvese zvakachipa uye zvakanaka, padhuze neese maSmalspåret, Nyika yaAstrid Lindgren, Virserums Konsthall nezvimwe zvinoitwa. An pekugara ne
Iyo musasa iri mushe iri pedyo neLake Hulingen muHultsfred. Inowanikwa munzvimbo yakanaka yekufamba padyo nepaki yenhoroondo yemuno. Munzvimbo iyi mune nhandare uye dziva rekushambira, kahawa, igwa uye
Hesjön yemhando yemisasa
Maodzanyemba eMålilla ndiyo musasa wakasikwa naHesjön. Kune nzvimbo dzekupaka dzekaravhani nedzimba dzinofamba, pamwe chete netende rakasiyana. Kuremara kupaka. Kubva pakupaka mota kune nzira inogadziriswa
Lönneberga musasa musasa
Nzvimbo dzekupaka dzekaravhani, dzimba dzemotokari uye mukana wekudzika musasa Pano pane mukana wechimbuzi chakaremara chine mvura inopisa uye yekuchinjisa imba. Barbecue nzvimbo uye anenge mazana 900 metres kunzvimbo yekugezera.
Stora Hammarsjön yemhando yemisasa
Yakarongeka iri munzvimbo yezvisikwa uye yekuchengetedza hove nzvimbo Stora Hammarsjön Kunze kwekunze kweHultsfred kune Stora Hammarsjön yakasikwa uye nzvimbo yekuchengetedza hove. KuStora Hammarsjön, angangoita makiromita gumi, pane musasa uri nyore neTC,
Lönneberga hostel iri kumucheto kweEmil Lönneberga. Hostel ine mibhedha makumi mashanu nemashanu. Iwo makamuri akashongedzwa ega ega nemabhedha maviri kusvika matanhatu mune yega yega kamuri. Zvakajairika
Muchikamu chekuchamhembe kweHultsfred kune Kloster purazi. Mumaruwa asi mukati mekufamba chinhambwe kuenda kumagirosa, nzvimbo yekushambira, nzira nhete uye nzvimbo dzakanaka dzekufamba. Pano unogona kuroja kamuri, furati